ကမ်းလှမ်းခြင်းနှင့်ပံ့ပိုးခြင်းပေးသောဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ဆက်သွယ်ပါ DataNumen ထုတ်ကုန်များ။ ကနေပရော်ဖက်ရှင်နယ်လေ့ကျင့်ရေးနှင့်ပေါင်းစည်းန်ဆောင်မှုများ DataNumen ပြန်လည်ရောင်းချသူသည်သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်အများဆုံးအမြတ်ငွေရရှိရန်ကူညီလိမ့်မည်။
ကမ္တာ့ SHI International Corp ဖုန်းနံပါတ်: + 1-888-764-8888
လိပ်စာ: SHI ဌာနချုပ်
290 Davidson ရိပ်သာလမ်း
ကမ္တာ့ SoftwareONE ဖုန်းနံပါတ်: + 41 44 832 41 69
နေရပ်လိပ်စာ: SoftwareONE AG | ကော်ပိုရိတ်ဌာနချုပ်
ကမ္တာ့ COMPAREX AG လိပ္စာ: ဂျာမနီ၊
ကမ္တာ့ CACI International Inc လိပ်စာ: အမေရိကန်၊ ဗာဂျီးနီးယား၊ Arlington ကောင်တီ
ကမ္တာ့ Insight Enterprises ဖုန်းနံပါတ်: + 1-800-467-4448
လိပ်စာ: Insight ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဌာနချုပ်
6820 အက်စ် Harl ရိပ်သာ
Temp, AZ 85283
ကမ္တာ့ Synnex Corporation ပင်မဖုန်းနံပါတ်: + 1-510-656-3333
အဓိကဖက်စ်: + 1-510-668-3777
အရောင်း: + 1-800-756-9888
44201 နိုဘယ်လ် Drive
ဂျာမနီ CCP Software GmbH ဖုန်းနံပါတ်: + 49 6421 1701-0
နေရပ်လိပ်စာ: CCP Software GmbH
အိႏၵိယ Select Software (I) Pvt. Ltd. ဖုန်းနံပါတ်: + 91-80-25285265
ဖက်စ်: + 91-80-25250510
လိပ္စာ: No.14, Balaji ကုန်သည်များ
ဒုတိယထပ်၊ ၁၀ လမ်းမကြီး
အိႏၵိယ AB&D Software India Pvt. Ltd. ကြိုးဖုန်း + 91-080-4111 5871
ဖုန်းနံပါတ်: + 91 96322 27977
လိပ္စာ: AB&D Software India Pvt Ltd
Sahakar Nagar, ဘန်ဂလို 560092
ဘရူနိုင်း Cogito Solutions Ltd. ဖုန်းနံပါတ်: + 852-23976665
ဖက်စ်: + 852-28775988
လိပ္စာ: ယူနစ် B, 13 / F ။ , Winsan Tower,
၉၈ Thomson လမ်း၊
တရုတ်နိုင်ငံ COGITO SOFTWARE CO.,LTD. Phone: +86-10-68421378, +86-10-68421379
ဖက်စ်: + 86-10-68703469
လိပ္စာ: အခန်း ၁၁၀၅၊ ၂၊ Hao Bai Da Sha,
Xisanhuan မြောက်လမ်း၊ Haidian ခရိုင်၊
ဥဇဘက် Softline Group ဖုန်း / ဖက်စ်: +7 (495) 232-00-23
web site ကို:
Derbenevskaya nab ။ 7, bld ။ ၈၊
မော်စကို, ရုရှား 115114
လွတ်လပ်သောနိုင်ငံများ၏ဓနသဟာယအဖွဲ့ (CIS) & Baltic နိုင်ငံများ Pba Consult LLC Pba Consult LLC
၈-၃၊ Yaroslavskaya လမ်း၊
မော်စကို, 129366, ရုရှား
ဖုန်းနံပါတ် +7 495 797-89-97
ဖက်စ်: +7 495 797-89-85
ရုရှားနိုင်ငံ Syssoft, LLC ဖုန်း: +7 (495) 646-14-71 ext.113
Pohodniy, ပယ် 4/1 proezd ။ ၁၁၁၊
မော်စကို 125373, ရုရှား
ရုရှားနိုင်ငံ Softmap, LLC Softmap, LLC
ဖုန်းနံပါတ် +7 (495) 627-69-00
တစ်ဦးဖြစ်လာ DataNumen ပြန်လည်ရောင်းချသူ:
DataNumen ပြန်လည်ရောင်းချသူများအနေဖြင့် ၀ င်ရောက်လာခြင်းဖြင့် ၀ င်ငွေတိုးရန်အခွင့်အရေးပေးသည် DataNumen Reseller Partner Program ။ ရိုးရှင်းသောကျောင်းအပ်နှံခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည်သင့်အားကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးနှင့်အစိတ်အပိုင်းဖြစ်လာစေလိမ့်မည်ost အောင်မြင်သောဒေတာများပြန်လည်နာလန်ထူထုတ်ကုန်ပြန်လည်ရောင်းချသူအစီအစဉ်။
၀ န်ဆောင်မှုများကိုရောင်းချသောနှင့် / သို့မဟုတ်သုံးစွဲသူများအားတိုက်ရိုက်ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (သို့) hardware ကိုဖြည့်ဆည်းသောတန်ဖိုးမြှင့်ပြန်လည်ရောင်းချသူများ၊ စနစ်ပေါင်းစည်းသူများနှင့်အတိုင်ပင်ခံများ၊ လက်လီအရောင်းဆိုင်များ၊ ဆော့ဖ်ဝဲဆိုင်များ၊ စတိုးဆိုင်များ၊ စူပါမားကက်များစသဖြင့်။
DataNumen ပြန်လည်ရောင်းချသူများအစီအစဉ်သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်?
လျှော့စျေး 65% အဖြစ်မြင့်မား, သင်၏စွမ်းဆောင်ရည်အားဖြင့်တိုးမြှင့်။
ပြန်လည်ရောင်းချသူအသစ်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည် 10% ချက်ချင်းလျှော့စျေး။ လတစ်လအတွင်းကုန်ပစ္စည်းတစ်ခု၏လိုင်စင် ၅ ခုကျော်ကိုသင်ရောင်းလိုက်သည်နှင့်အနည်းဆုံးရရှိလိမ့်မည် 20% နောက်လတွင်မည်သည့်ဝယ်ယူမှုအတွက်မဆိုလျှော့စျေး။ တဖန်သင်တို့ပိုမိုရောင်းချခြင်းအားဖြင့်ပိုပြီးလျှော့စျေးရနိုင်သည်, အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း:
သင်ထက်ပိုရောင်းလျှင်5လတစ်လအတွက်လိုင်စင်၊ 20% နောက်လအတွက်လျှော့စျေး!
ထက်ပိုလျှင် 10 လိုင်စင်, လျှော့စျေးဖြစ်လိမ့်မည် 25%!
ထက်ပိုလျှင် 20 လိုင်စင်, လျှော့စျေးဖြစ်လိမ့်မည် 28%!
ထက်ပိုလျှင် 50 လိုင်စင်, လျှော့စျေးဖြစ်လိမ့်မည် 35%!
ထက်ပိုလျှင် 100 လိုင်စင်, လျှော့စျေးဖြစ်လိမ့်မည် 50%!
ထက်ပိုလျှင် 200 လိုင်စင်, လျှော့စျေးဖြစ်လိမ့်မည် 65%!
ပိုမို၍ ရောင်း။ ပိုမိုရရှိပါ! Start ကိုအခုအချိန်မှာ!
မှတ်ချက်။ ။ အကယ်၍ သင်၏ရောင်းအားကျဆင်းသွားပါကလျှော့စျေးကိုလည်းလျှော့ချလိမ့်မည်။
ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မြင့်မားသောရောင်းအားအဆင့်ကိုခိုင်မာစွာအာမခံထားသည်။ ဒေတာပြန်လည်ဆယ်တင်ရေးနည်းပညာများတွင်ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့သည်နိုင်ငံပေါင်း ၁၃၀ ကျော်တွင်ဆုရသည့် data recovery software ကိုရောင်းချခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ ယ်ယူသူများသည်ကွန်ပျူတာအတွေ့အကြုံရှိသူများမှကျွမ်းကျင်သောအိုင်တီဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများအထိနှင့်အချက်အလက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအထိ၊ အသေးစားအဖွဲ့အစည်းများမှသည် Fortune 130 အပါအ ၀ င်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအထိအထိကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရှိပါသည်။
ဖြစ်နိုင်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်အထူးသတင်းသတင်းများကိုစostကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ပတ်သက်၍ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသတင်းအချက်အလက်များစွာနှင့်ဆက်နွယ်သောဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းအတွက်ဆက်သွယ်မှုကိုရယူပါ။ သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ရောင်းရန်အကောင်းဆုံးကုန်ပစ္စည်းများကိုရွေးချယ်ရန်၊ သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ရန်နှင့်ရောင်းအားထိရောက်မှုကိုနှိုင်းယှဉ်ရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်။
မြှင့်တင်ရေးပစ္စည်းများအပြည့်အဝ packages များ။
ထုတ်ကုန်အားလုံးအတွက်ဖော်ပြချက်၊ ကြော်ငြာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းများ၊ နဖူးစည်းစာတန်းများ၊ ဆုများ၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများ၊ အကောင်းဆုံးဖောက်သည်ထင်မြင်ချက်များ၊ developer များနှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းနှင့်အခြားအရာများအားလုံးအတွက်မြှင့်တင်ရေး - ပစ္စည်းများအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအတွက်အမြဲတမ်းရရှိနိုင်သည်။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်သင်လိုအပ်သည့်နဖူးစည်းစာတန်းတစ်ခုသို့မဟုတ်သင်လိုအပ်သည့်ရုပ်ပုံများကိုရှာဖွေသည့်အချိန်တွင်သင်အချိန်များစွာမဖြုန်းပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်နှင့်အတူပူးပေါင်းပါ ၀ င်သည့်ကြော်ငြာလှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။ ပြန်လည်ရောင်းချသူများအတွက်အထူးစျေးနှုန်းများ၊ အထူးလျှော့စျေးများ၊ အားလပ်ရက်အရောင်းအ ၀ ယ်များ၊ စာပို့စာများနှင့်အခြားများစွာရှိသည်။ မည်သည့်ကြော်ငြာအမျိုးအစားကိုမဆိုသင်အမြဲတမ်းတောင်းဆိုနိုင်သည်။ သတင်းကိုစီစဉ်သောအခါကော်မရှင်ရာခိုင်နှုန်းတိုးနှုန်းအပေါ်သင်အားကိုးနိုင်သည် posting, ကြော်ငြာလှုပ်ရှားမှုများနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ရပ်များ။ တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုကဲ့သို့သောလုပ်ဆောင်မှုများကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းငွေကြေးထောက်ပံ့သည်။ မင်းမှာအကြံဥာဏ်ရှိလား။ ဆက်သွယ်ရန်!
မည်သည့်မေးခွန်းများ၊ အကြံပြုချက်များနှင့်တောင်းဆိုမှုများကိုမဆိုထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်ဖြစ်ပြီးသင့်အားအချိန်တိုအတွင်းအရည်အသွေးမြင့်တုံ့ပြန်ချက်ကိုသင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ငါတို့သုံးပါ တုံ့ပြန်ချက်ပုံစံ ကျွန်ုပ်တို့၏ပြန်လည်ရောင်းချသူများ၏အစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများမေးရန်သို့မဟုတ်တောင်းဆိုရန်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ပြန်လည်ရောင်းချသူများအစီအစဉ်ကိုစီမံသည် MyCommerce.comဆော့ဖ်ဝဲပြန်လည်ရောင်းချသူများအစီအစဉ်တွင်ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်သည်အလွန်လွယ်ကူသည်။ လျှို့ဝှက်က c မရှိပါostဟုတ်တယ် အခမဲ့ စာရင်းသွင်းရန်
သင်မှတ်ပုံတင်ပြီးနောက်သင့် reseller ID ပါသောအတည်ပြုအီးမေးလ်ကိုပို့ပေးပါမည်။ သင့်ရဲ့ပြန်လည်ရောင်းချသူအကောင့်ဖြစ်လိမ့်မည် ချက်ချင်းအတည်ပြုခဲ့သည် အောက်ပါအတိုင်းကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကို ၀ ယ်ယူရန်သင်၎င်းကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
အလည်အပတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက် သင်ဝယ်ယူလိုသည့်သက်ဆိုင်ရာကုန်ပစ္စည်းအတွက် MyCommerce order link ကိုနှိပ်ပါ။
MyCommerce အမှာစာမှာ၊ “ ဝယ်သူ / ပြန်လည်ရောင်းချသူကိုပြန်လာ” သင်၏ Reseller ID နှင့်စကားဝှက်ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ ထိုအခါသင်ထုတ်ကုန်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ ပြန်လည်ရောင်းချသူ ID ကိုကျွန်ုပ်တို့ထံပေးပို့သောမှတ်ပုံတင်အတည်ပြုအီးမေးလ်တွင်တွေ့နိုင်သည်။ သင်မှတ်ပုံတင်သည့်အခါစကားဝှက်ကိုသင်ထည့်လိုက်သည်။
အစပိုင်းမှာကျွန်ုပ်တို့က ၁၀% လျှော့စျေးပေးထားတယ်၊ သင်ဟာလတစ်လအတွင်းမှာထုတ်ကုန်တစ်ခုစီရဲ့လိုင်စင် ၅ ခုကျော်ကိုရောင်းပြီးတာနဲ့သင်ရရှိလိမ့်မယ် ပိုပြီးလျှော့စျေး နောက်လအတွက်မည်သည့်ဝယ်ယူမှုအတွက်မဆို။